Admin Executive | Max Myanmar Construction Co.,Ltd. ﻿
•	လစဉ် Project များမှအချက်အလက်များကောက်ယူ၍ Report ပြင်ဆင်ခြင်း။
•	ကုမ္ပဏီ၏ စာချုပ်များနှင့် Certificate များသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း။ (သက်တမ်းကုန်လျှင်)
•	QMS Team တွင်လိုအပ်သော ISO နှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များအား ကူညီဆောင်ရွက် ခြင်း။
•	QMS Team တွင် Asst:DC အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ။
•	Meeting Minutes များ စာစီပေးခြင်း။
•	ဌာနသို့ဝင်လာသော ဖုန်းများအား လက်ခံဖြေဆိုပေးခြင်း။
•	ပျော်ပွဲရွင်ပွဲများ ကထိန်အလှူပွဲများအား ပါဝင်ကူညီပေးခြင်း။
•	ရုံးမှလိုအပ်သော Admin materials များအားဈေးဝယ်ပေးခြင်း။
•	Meeting Minutes များ Email ပို့ပေးခြင်း။
•	HOD မရှိလျှင် Gate Pass များတွင်စိစစ်၍ကိုယ်စားလက်မှတ်ထိုးပေးခြင်း။
•	Related certificate with administration.
•	Admin ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကောင်းစွာနားလည်ခြင်း။
•	Computer ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးနိုင်ခြင်း။
•	4-Skill (English)
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
Work location Alanpya Pagoda Rd,Dagon,Yangon.
Admin Executive Admin,Secretarial&PR Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Max Myanmar Construction Co.,Ltd. Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Construction/Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon